နောက်ပြီး, ခြေသည်းအ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Topic: နောက်ပြီး, ခြေသည်းအ
CND Shellac နှင့် OPI Gel အရောင်အကြားကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရှိပါသလား?
CND Shellac နှင့် OPI Gel Color ကွာခြားမှုရှိသလား။ ငါယခင်အဖြေကို join ။ ဖော်မြူလာလိုလားတောင့်တမှုကောင်းသည့်ဂျယ်ဆေးသုတ်ဆေးများ CND ဂျယ်ဆေးသုတ်သည့်ဆေးသည်ကြာရှည်မခံတော့ပါ။ ယခု…
ဖောက်သည်များအစပြုသူ Manicurist ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဘယ်လို, prompt? ငါသည်အသက်ဥပမာကျေးဇူးတင်ဖြစ်သင့်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကို ၀ န်ထမ်းအသစ်များကိုမည်သို့ဆွဲဆောင်ရမည်ကိုပြောပြပါ။ ငါဘဝကနေဥပမာများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်နမူနာ။ ပထမ ဦး ဆုံးသင်ခန်းစာပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်မြင်သောအရာကိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ...
maniyura အဘို့အစက်, ဒါမှမဟုတ်မြည်းကိုကဘာလဲ
maniyur အတွက်အစက်သို့မဟုတ်အစက်ဆိုသည်မှာအစက် - လက်သည်းဒီဇိုင်းအတွက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအချင်း၏၎င်း၏အကူအညီပေးရေးအချက်များဖြင့်ရေးဆွဲထားသည့်နောက်အစက်များ၏ထိတွေ့မှုတစ်ခုစီသည်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပို၍ သေးငယ်သည့်အချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အဆိုပါလက်သည်းအဖြစ် extension ကို၏ဖယ်ရှားရေး?
မိန်းကလေးများသည်မီးချောင်းရောင်တွင်မည်မျှခြောက်သွေ့မည်နည်း ???? ၃ မှ ၁၀ မိနစ်အထိ၊ မည်သည့်အရောင်တင်ဆီနှင့်မည်မျှသောလက်သည်းများပေါ်၌ ၂ မိနစ်လျှင်ခရမ်းလွန်မီးခွက်တွင်စက္ကန့် ၃၀ ကြာသည်။
ငါသည်ငါ့ခြေထောက်များကိုနေ့တိုင်းဆေးကြောသော်လည်းခုတ်ဖြတ်သောအခါအဘယ်ကြောင့်ငါ့ခြေချောင်းဆိုးရွားအနံ့သလဲ ပြီးတော့သူတို့ဘယ်ကနေကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သတိပြုမိခဲ့တယ်။ လက်သည်းတွေကအနံ့မခံပါဘူး၊
Biogel သို့မဟုတ် acrylic အာူး?
biogel သို့မဟုတ် acrylic နှင့်အတူအားကောင်း? ငါ biogel နဲ့အားဖြည့်ရတာကိုကြိုက်တယ်။ အကယ်၍ ပထမဆုံးမာစတာမှာဇီဝဗေဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြproblemsနာရှိရင်သူကထိုက်တန်ပါတယ်။
လက်သည်းများပေါ်၌အစက်အပြောက်များဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းရင်းကိုမည်သူသိသနည်း။ လက်သည်းပေါ်မှာလား သို့မဟုတ်လက်သည်းအောက်၌? အောက်မှာရှိရင်ဗီတာမင်တွေလုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူး၊ အထူးသဖြင့်ကယ်လစီယမ်၊ လက်သည်းတွေအားနည်းနေတယ်၊
လက်သည်းကိုဘယ်လိုချဲ့ရမလဲ။ သုညသို့မဖြတ်ပါနှင့်၊ ၎င်းသည်မိုက်ခရိုချီယာကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်သောအစွန်းသည်အစဉ်အမြဲတည်ရှိနေသင့်သည်၊ ပိုကောင်းသည်မှာ Wow ဓာတ်ပုံထက်ပိုကြာသင့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မရှိလျှင် ...
ကျွန်မအိမ်မှာနေတဲ့နောက်ပြီးလုပ်ပေးချင်တယ်။ ဘယ်မှာ clients များရရှိရန်ရှိရာ, စတင်ရန်?
အိမ်မှာလက်သည်းအလှပြုပြင်ချင်တယ် ဘယ်ကိုစဖို့၊ Koshka Umnaja ကလုံးဝမှန်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမလုပ်ချင်ဘူး၊ အကြိမ်အနည်းငယ်လုပ်ဖူးတယ်၊ မမျှော်လင့်ဘဲ flash ထဲမှာပျံသန်းခဲ့တယ်။ မှ…
သို့မဟုတ် shellac ဂျယ်အရောင်
Shellac သို့မဟုတ် shellac gel အရောင်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရောင်ဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်လျှောက်လွှာနည်းလမ်း (ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံဖြင့်တင်ပြခြင်း)၊ ကြာရှည်ခံမှု၊ အရောင်များနှင့်ဖယ်ရှားခြင်း (shellac ကိုအလွယ်တကူဖယ်ရှားသည်) နှင့်ကွဲပြားသည်။
သင်၏လက်အသားအရေကိုအိမ်တွင်ပျော့ပျောင်းအောင်လုပ်နည်းသင်အကြံပြုချက်အချို့ကိုလိုက်နာပါကသင်၏လက်အရေပြားကိုအိမ်တွင်ဂရုစိုက်ရန်မလွယ်ကူပါ။ လက်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်အကြံပြုချက်များ ...
လက်သည်းကိုက်သောသူများအတွက်အထူးလက်သည်းဆိုးဆေး၏အမည်ကားအဘယ်နည်း။ မင်းသမီး Nekusayka (ကလေးများအလှကုန်ပစ္စည်း) မှကလေးတစ် ဦး ကိုနို့မထုတ်နိုင်ပါ။ "Lady Rose" စီးရီးတွင်ထိုကဲ့သို့သောအရောင်တင်ဆီဖြစ်သော်လည်းအစွဲများနေဆဲ ...
ငါနောက်ပြီးအောင် HIV ပိုးကူးစက်ရနိုင်မလား?
လက်သည်းအလှပြုပြင်နေစဉ်သင်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးကူးယူနိုင်သလား။ aids virus သည်အလွန်မတည်မငြိမ်ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် HIV ကူးစက်ခံရရန်အတွက်သင်သည်ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ဆဲလ်အရေအတွက်လိုအပ်သည်၊ ၎င်းတို့သည်ထိုအရေအတွက်ထဲတွင်ရှိနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
လက်သည်းကအရမ်းကျိုးဖြစ်ကြသည် exfoliate ။ အဘယ်သို့ပြုသနည်း
လက်သည်းများသည်အလွန်ဆိုးဆိုးရွားရွား၊ ဘာလုပ်မလဲ? နေ့တိုင်းလက်သည်းများကိုအရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းဖြင့်ဆေးဝါးများရောင်းချခြင်း (ဆေးဝါးများရောင်းဝယ်ခြင်း) ။ လက်သည်းများသည် ကြာရှည်၍ အားကောင်းလာလိမ့်မည်။ ဗာဒံသီးသည်လက်သည်းအတွက်ကောင်းသည် အကြံပြုထားသည် ...
ခရမ်းလွန်မီးချောင်းများသည်အန္တရာယ်ရှိသလား။ ရယ်စရာအဖြေများ! အထူးသဖြင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အလင်းဖြင့်ပိုးသန့်ဆေးထားသောဆေးရုံများ - ယေဘုယျအားဖြင့်မီး! ! UV လက်သည်းမီးခွက်များသည်အန္တရာယ်ကင်းပါသည်။ ၎င်းတို့အတွင်းရှိဓါတ်ရောင်ခြည်ရောင်စဉ်သည်မတူညီပါ။
manicure နှင့်ပတ်သက်။ manicure အကြောင်းကိုအတန်းအစားဆရာမွေးနေ့ကဗျာများကိုရှာဖွေကူညီ! အတန်းဆရာအားဂုဏ်ပြုပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်အားကံကောင်းပါစေ၊ သို့မှသာပြproblemsနာအားလုံးဖြေရှင်းနိုင်ပါမည်။ လူတိုင်းကိုသင့်အားနားလည်စေရန်၊ မမှားပါစေ၊ စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ချစ်ရန်၊
သင်လက်သည်းဖို့လျှောက်ထားသည့်အခါမီးခွက်နှင့်မည်မျှအချိန်ဇီဝလိမ်းဆေးထဲမှာခန်းခြောက်ဖို့ primer လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုပြောပါ?
လက်သည်းခွက်ထဲမှာခြောက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်၊ လက်သည်းကို biogel သုံးတဲ့အခါဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ ၁) primer ကိုခြောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၂) ဇီဝလောင်စာများသည်များသောအားဖြင့် primer ကိုကြိုတင်မလိုအပ်ပါ။
သင်၏လက်ချောင်းများပေါ်တွင် Burrs များကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း။ ... ပန်းကန်လုံးထဲရှိသံလွင်ဆီကိုအပူပေးပါ။ ဆီအအေးသည်အထိထားပါ။ ရေနံယိုစိမ့်အောင်၊ ဝါဂွမ်းလက်အိတ်တွေဝတ်ပြီး ...
primer သို့မဟုတ် bonder? မိန်းကလေးများဂျယ်လက်သည်းများအတွက် primer နှင့် bonder သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါသလား ဤရွေ့ကား2အစိတ်အပိုင်းလိုအပ်? လျှင်
Primer လား Bonder လား။ မိန်းကလေးများသည်ဂျယ်လက်သည်းနှင့်နှောင်ကြိုးအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသလား။ ဒီအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုလိုအပ်ပါသလား။ အကယ်၍ Primer သည်အာဖရိက၌ရှိလျှင်၎င်း primer သည်အက်ဆစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
81 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,988 စက္ကန့်ကျော် Generate ။